Ra’iisul wasaaraha XFS oo kulan amniga looga hadlayo la qaatay Hay’adaha Amniga iyo Maamulka G/banaadir | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Ra’iisul wasaaraha XFS oo kulan amniga looga hadlayo la qaatay Hay’adaha Amniga...
Ra’iisul wasaaraha XFS oo kulan amniga looga hadlayo la qaatay Hay’adaha Amniga iyo Maamulka G/banaadir
Muqdisho (SNTV), dar-dar galinta amniga caasimadda ayaa looga hadlayey shirkaan uu Ra’iisul Waasaaraha xukumadda federaaLka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre uu la qaatay hay’addaha amniga iyo maamulka gobolka Banaadir.
shirkaan oo ka qabsoomay xarunta Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, ayaa lagu soo bandhigay guulihi ay ku najaxeen shacabka Soomaaliyeed ee xagga amniga ahaa oo ay soo hoyeen hay’addaha amniga bilooyinka lasoo dhaafay, kana mid ahayd bishii barakaysneyd ee Ramadan iyo dajinta qorshaha Labaad ee bilooyinka soo socda.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali kheyre oo shirka ka hadlay ayaa xusay in hay’addaha amniga dalku ay shaqo wanaagsan qabteen oo mudan in loogu Hambalyeeyo , loogana bahan yahay in Muqdisho ay noqoto maagalo Nabdoon, islamarkaana Ciidanka Booliska ay la wareegaan Amaanka guud ee Caasimadda , si ay ula jaan qaado Magaalooyinka ku horumaray xagga amniga iyo xasiloonida.
Guddoomiyaha Maamulka Gobolka banaadir ahna duqa Caasimadda Soomaaaliya Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ENG Yarisow oo la hadlay Warbaahinta qaranka, ayaa tilmaamay guulaha amni ee caasimada ay ku timid wada shaqaynta hay’addaha amniga iyo shacabka oo muujiyey in ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada sugida amniga.
Previous articleWasiirka Difaaca XFS oo la kulmay saraakiil ka socota Mareykanka, Midowga Yurub iyo Turkiga
Next articleWasiirka Difaaca XFS oo la kulmay saraakiil ka socota Mareykanka, Midowga Yurub iyo Turkiga “Sawirro”